Keating oo Boosaaso u tagay xalinta Xiisada Gaalkacyo, xabad joojin cusub oo la gaaray | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Keating oo Boosaaso u tagay xalinta Xiisada Gaalkacyo, xabad joojin cusub oo la gaaray
written by warsan radio 07/11/2016
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada.
Socdaalka Keating ayaa salka ku haya xalinta Xiisada Gaalkacyo, kaddib markii uu bur bur ku yimid heshiis xabad joojin ahaa oo la kala dhex dhigay Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Danjire Keating ayaa khadka taleefanka kula hadlay Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid iyo Madaxweynaha Galmudug, isagoo ka wada codsaday in arrinta Gaalkacyo si dhab ah loogu istaago xalinteeda.
Sidoo kale Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay, iyagoo ku balamay in xabada la joojiyo, iyagoo la kala hadlay Taliyeyaasha ciidamada labada dhinaca, si loogu adkeeyo joojinta dagaalada.
Madaxweynaha Puntland iyo Ergeyga Qaramada Midoobey oo shir jaraa’id oo wada jir ah qabtay ayaa ka hadlay xaalada Gaalkacyo iyo xabad joojinta la gaaray, waxaana si wada jir ah u iclaamiyeen in maalinta jimcaha ay Madaxda Soomaalida isugu tagaan Gaalkacyo, si colaada loo joojiyo.
C/wali Gaas ayaa sheegay inuu qadka taleefanka kula hadlay Taliyeyaasha Ciidamada, isla markaana uu amar ku siiyay inay xabad joojin la sameeyo, isagoo mar kale rajo ka muujiyay in xabad joojinta ay hirgasho.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa sheegay in khadka taleefanka uu kula hadlay Madaxweynaha Galmudug iyo Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid, ayna isla qaateen in la dhaqan geliyo xabad joojin ka bilaabata maanta sida uu yiri.
Heshiiskii ay Imaaraadka Carabta kala dhex dhigtay Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa dhaqan geli waayay, iyadoo heshiiskaas uu dhigayay in xabada la joojiyo, in dadkii barakacay la soo celiyo in 20-ka bisha labada Madaxweyne, iyo Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada isugu tagaan Kismaayo, si heshiiska loo dhameystiro.
Dagaal faraha looga gubtay oo ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux ayaa shalay ka dhacay Gaalkacyo, waxaana dagaalkan uu ahaa midkii ugu cuslaa ee soo mara magaalada, tan iyo markii bishii hore uu bilowday dagaalada u dhaxeeya labada maamul.
Keating oo Boosaaso u tagay xalinta Xiisada Gaalkacyo, xabad joojin cusub oo la gaaray was last modified: November 7th, 2016 by warsan radio
Dhageyso+Sawiro:-Musharax Lafta-gareen oo deeq kale duwan gaarsiiyay iskuulka Agoomaha iyo xarunta Dhimirka ee Baydhabo.